Njikwa ngosi na Radian6 | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 9, 2009 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Webtrends kwuwaara mmekọrịta dị mkpa na Uwaegu 6 na Webtrends Na-eme 2009 Conference. Site na saịtị Radian6:
Mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na mmekọrịta ọha na eze na mgbasa ozi na-agbanwe ọrụ ahụ. Ikike ahia abughizi naanị ngalaba nke ụlọ ọrụ ahụ. Akara akọwapụtara ugbu a dị ka mkpokọta mkparịta ụka niile na-ewere ọnọdụ n'etiti ndị ọrụ yana ọ na-eme n'agbanyeghị ma ị bụ akụkụ nke mkparịta ụka ndị a ma ọ bụ na ọ bụghị.
Radian6 lekwasịrị anya n’iwube nlezianya nyocha na nyocha nyocha niile maka ndị ọkachamara PR na ndị mgbasa ozi ka ha wee bụrụ ndị ọkachamara na soshal midia.
Ndokwa nke nchịkọta na aha di oke nkpa na uzo mgbasa ozi. Ndị na-ere ahịa n'Onlinentanet na-emehie mgbe nile ikwere na ụzọ nke atụmanya iji ghọọ onye ahịa bụ mgbe ha rutere na saịtị weebụ gị ma ọ bụ blog gị. Nke a abụghị otu ọbụla… ụzọ ahụ bidoro ebe ndị mmadụ hụrụ gị. Nke a bụ igwe na - achọ ihe nchọta mana ndị na - elekọta mmadụ dịka Twitter, netwọkụ mmekọrịta, na saịtị ịdebanye aha mmadụ na - aghọ isi iyi ọzọ nke atụmanya.
Njikọ Webtrends na Radian6 bụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ụlọ ọrụ ahụ. Nkwenye Webtrends nke itinye aka na ntanetị na nke mpụga na ụzọ iji jikọta ndị ahụ n'elu ikpo okwu ha bụ ọhụụ na ọdịnihu nke nchịkọta weebụ. Ngwaahịa Radian6 dị ezigbo iche na aha njikwa aha, ha lekwasịrị anya na nlekota oru mgbasa ozi, mmesho na njikọ aka. Nakwa, ha nwere nnukwu njirimara njirimara!
Radian6 mara nsogbu a - ndị otu azụmaahịa enweghị ike itinye mkparịta ụka ọ bụla n'ịntanetị - yabụ ha mepụtara usoro ebe oge ọ bụla ekwuru ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, a na-eji mmetụta nke isi mmalite na-ebute ụzọ ma kenye ọrụ iji zaghachi ma ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
Tags: christotonchris ramseyObinna 6njikwa ahanlekota oru mgbasa ozi
Daalụ nke ukwuu maka igosipụta vidiyo a na ọkwa a. Anyị nwere obi anụrị banyere ike mmekọrịta anyị na Webtrends; site n'inwe ezi mmetụ na mma metrik na mmụba na nkwukọrịta mmekọrịta, ọ ga-adị mkpa mgbe niile na anyị nwere nyocha miri emi yana atụmatụ itinye aka nke ga-esi na mbọ nlekota anyị.
Ọ bụ olile anya anyị na anyị na-enye ike karịa ụlọ ọrụ ka anyị ghara ịnụ ma hụ ihe a na-ekwu maka ha n'ịntanetị, mana ghọta etu nke ahụ si azụ ahịa ha ma sonye na ntanetị n'ụzọ ga-abara ha na ndị ahịa ha uru.
Director nke Obodo | Uwaegu 6